Khubaza ukuqinisekiswa kwezinyathelo ezimbili kwe-Apple ID | Ngivela kwa-mac
Njenganoma yiluphi uhlelo lokuqinisekisa nokulawula, ayikho indlela ephelele. Ukuqinisekiswa kwezinyathelo ezimbili kwe-Apple ID kudinga ikhompyutha yethu yesibili ukuthi idinge ukuxhumeka kwe-inthanethi ukuthola ikhodi yokuqinisekisa. Abantu abaningi abahlala endaweni lapho kutholakala khona ucingo noma i-Intanethi. Ezindabeni zakamuva zokuphepha kwe-Apple sabona ukuthi kuyasebenza ezinhlelweni zokuphepha, lapho imininingwane ingahambi ngenethiwekhi yamanethiwekhi futhi isibonelo salokhu ukuvulwa kweMac eMacOS Sierra ne-Apple Watch.
Kunconywa ukuthi kwenziwe ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili ukuze sizikhombe nge-Apple, kepha uma ngasizathu simbe sifuna ukukusebenzisa, sizokukhombisa ukuthi ukwenze kanjani.
Ngenxa yalokhu sizokwazi ukufinyelela kufayela le- Ikhasi lokuphathwa kwe-Apple ID bese sifaka i-ID yethu ne-password, khona-ke izosicela ukuthi siqinisekise ukufinyelela kwethu, njengoba sikulungiselele kuze kube manje. Khumbula ukuthi njengamanje ingaqinisekiswa ngokuthola i-SMS enombolweni esiyibonisayo, kanye nokuthumela ikhodi enamadijithi ama-4 kudivayisi esebenzisa i-IOS.
Sizofinyelela ekhasini lokuphatha. Kuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi sithathe ithuba lokuqinisekisa ukuthi imininingwane esiyinike i-Apple isesikhathini samanje: amakheli e-imeyili, ikheli leposi (lokuthumela imikhiqizo ephathekayo), amadivayisi lapho i-ID yethu ikhona, njll. Kepha okusithandayo namuhla ukufinyelela ingxenye yezokuphepha. Kulesi sigaba sizothola inketho Ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili futhi kuzokwenziwa kusebenze.
Ngemuva kokukuqinisekisa lokhu, sizothola engxenyeni engaphezulu kwesokudla ngombala ohlaza okwesibhakabhaka, igama elithi "hlela" siyachofoza kulo bese siya kwimenyu enwetshiwe echaza amafomu okuqinisekisa i-Apple okufanele iqinisekise ukuthi singumnikazi walokhu Umazisi. Iphuzu lokugcina ukuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili futhi ngakwesokunene kusivumela ukuthi sikusebenzise.
Uma lokhu sekwenziwe, kuzosicela ukuthi sibuyekeze imibuzo emithathu yezokuphepha futhi ngemuva kwale nqubo sizokwazi ukuvala iseshini yethu, ngokuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili kukhutshaziwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ufuna ukuvala ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili kwe-Apple ID? Sikukhombisa ukuthi ukwenze kanjani
Isithombe se-Alvaro Quezada placeholder kusho
Yini okufanele ngiyenze uma amandla okukhubaza ukuqinisekiswa okuzinyathelo ezimbili engasabonakali ku-akhawunti yami?
Phendula u-Alvaro Quezada
I-Cleaner Pro - Uhlelo lokusebenza lokuphatha oxhumana nabo nokuqeda okuphindiwe